कोरोनाको नयाँ रेकर्ड एकै दिन ८६५९ संक्रमित ५८ को मृत्युु – Asal Kura
गृहपृष्ठ कोरोनाको नयाँ रेकर्ड एकै दिन ८६५९ संक्रमित ५८ को मृत्युु
कोरोनाको नयाँ रेकर्ड एकै दिन ८६५९ संक्रमित ५८ को मृत्युु
योसँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ३ लाख ५९ हजार ६१० रहेको छ । बुधबारसम्म कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या ६६ हजार ३५२ पुगेको छ । जसमध्ये ४७६४ जना संस्थागत आइसोलेसनमा र ६१ हजार ५८८ जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या १,९९३ रहेको छ । हालसम्म देशभर २ लाख ८९ हजार ७८३ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
पछिल्लाे - किन आउँछ शरीरमा सेतो धर्सा? उपचार कसरी गर्ने?
अघिल्लाे - प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव देउवाले गरे अस्विकार, अब के होला?